TORITENY Alahady 28 Aogositra 2017 | FJKM Amboniloha
Jeremia 38 : 9 – 16 / Lioka 21 : 12 – 19 / II Koritiana 1 : 3 – 7
Raha miresaka hoe fijaliana amin’ny fanarahana ny Tompo, dia ny Apostoly no niharan’izany mafy indrindra. Izany fiainana nosedrain’ny mpianatry ny Tompo izany koa no manjary iainan’ny olona izay manara-dia ny Tompo ankehitriny.
Inona no tsiambaratelon’ny fandresena manoloana ny fijaliana tsy atrehina ? Andraisantsika fampianarana ny Lioka 21 : 12 – 19
Mandresy fijaliana ny vavolombelon’ny Tompo : rehefa miandany amin’ny Tompo.
Miankina ary manankina tanteraka ny fiainany ao amin’ny Tompo, izany no atao hoe olona miandany amin’Andriamanitra. Hita soritra ary tsy azo afenina eny amin’ny endriky ny olona manana io fitsipi-piainana io ny fiadanana feno any anatiny.
Misy tokoa mantsy olona tsy mety miraikitra amin’Andriamanitra na dia efa mahafantatra Azy, ny heriny sy ny asany aza fa dia mikiry biby amin’ny herin’ny tenany mba hampahomby azy amin’ny fiainany.
Izao andinin-tsoratra Masina izao dia mampianatra antsika fa ny fiandaniana amin’Andriamanitra no ahafahana mahatanteraka ny asa sy izay kasaina atao eo amin’ny fiainana ary dia arovan’Andriamanitra, tolorany saina tanteraka ny olona mialoka Aminy. cf and 13 -14
Lesona : Misedra zava-tsarotra amin’ny endriny samihafa ny olona rehetra, raha te ho mpandresy anefa, dia mila miray hevitra amin’Andriamanitra, Miandany Aminy, mamantatra sy miaina tanteraka izay ankasitrahany.
Mandresy fijaliana ny vavolombelon’ny Tompo : rehefa maharitra
Miaina ao anatin’ny faharetana manoloana ireo fanenjehana, fahoriana sy adin-tsaina sns …. Mamaly soa ny mpanompony Andriamanitra na dia hovonoina ety an-tany aza. Tsy maintsy lalovana ny fijaliana noho ny amin’ny Tompo ary mifikitra sy maharitra ao Aminy. Ao anatin’io faharetana io indrindra no hamonjen’Andriamanitra ny ain’ny mpanompony cf and 18 -19.
Amin’ny fahafenoana no idirako ny lanitra raha mitoetra tsara amin’ny faharetana ao amin’Andriamanitra aho.
Lesona : Aoka mba tsy ny fahorina ety an-tany no hampiala ahy amin’ny fitiavan’ Andriamanitra. Mijery akaiky ny fiainako Izy ka mihazona ahy tsy hianjera. Ny andrasana amiko dia hananako faharetana amin’ny fiandaniana Aminy.
Tsy ilaozan-java- manahirana ny fiainana ety an-tany, na fijaliana vokatry ny fandavana ny sitrapon’Andrimanitra, na fahoriana vokatry ny fanarahana an’Andriamanitra. Vaha olana tsotra no atolotry ny Tompo : aoka hiandany amin’Andrimanitra aho ary hanana faharetana amin’ny fiarahana Aminy.
Catégories :	Fampianarana, Soratra Masina, Toriteny	/ par AnjGab 1 septembre 2017